लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा काजाक किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तामिल तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा वारे-वारे शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
आवरण लेख | राम्रो बानी कसरी बसाल्ने
३. हार नमान्नुहोस्
भनिन्छ, कुनै पनि नयाँ बानी बसाल्न २१ दिन लाग्छ। तर अनुसन्धानले देखाएअनुसार कसै-कसैलाई भने त्योभन्दा बढी वा कम समय पनि लाग्न सक्छ। के त्यसो भन्दैमा निराश हुनुपर्छ?
मानौं, तपाईंले हप्तामा तीन दिन व्यायाम गर्ने लक्ष्य राख्नुभयो।
पहिलो हप्ता, लक्ष्य पूरा गर्नुभयो।
दोस्रो हप्ता, एक दिन छुटाउनुभयो।
तेस्रो हप्ता, फेरि तीनै दिन गर्नुभयो।
चौथो हप्ता, बल्लतल्ल एक दिन गर्नुभयो।
पाँचौं हप्ता, फेरि लक्ष्यअनुसारै गर्नुभयो। त्यसपछि भने बानी पर्न थाल्यो।
नयाँ बानी बसाल्न पाँच हप्ता लाग्यो। हुन त यो लामो समय जस्तो लाग्ला तर तपाईं एक पटक सफल हुनुभयो भने बानी बस्नेछ।
बाइबलको सिद्धान्त: “धर्मी मानिस सातपल्ट लोट्‌यो भने पनि फेरि उठ्‌छ।”—हितोपदेश २४:१६.
बाइबलले हामीलाई हार नमान्न प्रोत्साहन दिएको छ। हामी कति पटक लड्‌छौं, त्यो होइन बरु कति पटक उठ्‌छौं, त्यो महत्त्वपूर्ण हो।
हामी कति पटक लड्‌छौं, त्यो होइन बरु कति पटक उठ्‌छौं, त्यो महत्त्वपूर्ण हो
लक्ष्यबाट एक चोटि चुक्दैमा कहिल्यै सफलता हात लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा नपुग्नुहोस्। तपाईंको बाटोमा विभिन्न विघ्नबाधा आइपर्छ भन्ने कुरा मनमा राख्नुहोस्।
असफलतामा होइन, सफलतामा ध्यान दिनुहोस्। जस्तै, आफ्नो छोराछोरीसित कुराकानी गर्ने तरिका सुधार्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने आफैलाई सोध्नुहोस्, ‘छोराछोरीलाई झपार्न मन लाग्दा पनि मैले आफूलाई रोकेको पछिल्लो पटक कहिले थियो? झपार्नुको साटो के गरेको थिएँ? अब फेरि त्यसै गर्न मैले के गर्नुपर्छ?’ यस्ता प्रश्नहरूले असफलतामा होइन, सफलतामा ध्यान दिन मदत गर्छ। अनि सही काम गर्ने आत्मबल बढाउँछ।
के तपाईं यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउन चाहनुहुन्छ? जस्तै: निराशाको सामना कसरी गर्ने?, परिवारलाई कसरी सुखी बनाउने? अनि साँचो आनन्द कसरी पाउने? चाहनुहुन्छ भने कुनै यहोवाको साक्षीसित कुरा गर्नुहोस् अथवा हाम्रो वेबसाइट jw.org/ne हेर्नुहोस्। (g16-E No. 4)
“तेरो आँखाले एक टक लाएर हेरोस्।”—हितोपदेश ४:२५.
‘पछाडिका कुराहरूलाई बिर्सेर अनि अगाडिका कुराहरूतिर लम्केर लक्ष्यसम्म पुग्न पछि लागिरहेको छु।’—फिलिप्पी ३:१३, १४.
हामीलाई किन डोऱ्याइ चाहिन्छ र कुन दुई वटा आज्ञा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्‌, येशूले बताउनुभयो।